Maalinta: Noofambar 5, 2017
Wasaaradda Gaadiidka Carabta ee Qatar
Wasiirka Gaadiidka, Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan oo ka socda Qatara si ay xiriir rasmi ah ula yeeshaan, ayaa Cawad ku kulmay Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta Qatar Casim es-Saliti. Dekadda Xamaad ee Doha [More ...]
Sharaxaadda Madaxweynaha Nostalgic Tram
Duqa Magaalada Düzce Dursun Ay ayaa sheegay in taraamka nostalgic-ga uu shaqeyn doono gudaha 10 maalmood. Duqa magaalada Düzce Dursun Ay, oo kaqeybgaley munaasabadda 'Maalinta Cunnada Joorjiyaanka' ee Ururka Dhaqanka Joorjiyaanka ee Düzce, ayaa weydiisay su'aalaha Öncü Haber [More ...]
Aziz Sancar iyo Ihsan Alyanak waxay adeegsanayeen adeega İzmir
Labadii markab ee ugu dambeeyay ee 15 maraakiibta maraakiibta, oo ay soo bandhigtay İzmir Metropolitan Dowlada hoose ee gaadiidka badda, ayaa la geliyay. Ihsan Alyanak, mid ka mid ah halyeeyadii halyeeyada Izmir, iyo Aziz Sancar, oo ah borofishanka ku guuleysta abaalmarinta Nobel Prize ee dalka Turkiga. [More ...]
Motas, Anaakşehir-Yeni Malatyaspor Ready Garoonka
Motaş AŞ ee kulanka Malatya. Gawaarida iyo shaqaalaha u diyaar garoobaya 5 14 kulanka Basaksehir-Yeni Malatyaspor ee ka dhacaya garoonka cusub ee New York bisha november. [More ...]
Maanta taariikhda: 5 November 2016 Gaadiidka Gaadiidka ee Samsun te
Maanta oo ah Taariikhda 5 Noofambar 1903 Go'aan ahaan waxaa la goaamiyey in kala badh ardayda ka qalin jabisa Hendeshane-i Mulkiye laga shaqaaleysiin doono Wadada tareenka ee Hejaz. Codsigan waxaa loo fidiyay qalin-jabiyayaashii Mekteb-i Sanayi iyo Darü'l-Hayr-i Cali markay ahayd 1906. 5 [More ...]